amin’ireo firenena mpikambana eo anivon’ny APE na ny fifampiraharahana eo amin’ny fifandraisana ara-barotra eo amin’i Madagasikara sy ny vondrona eoropeanina. Araka ny nambaran’ny minisitry ny varotra sy ny fanjifana, Chabanni Nourdine, dia nahitana tombony ny fidirana tao anatin’ity fifanarahana ity satria raha nampiditra 499 tapitrisa Euro teo izany ny taona 2012 dia tafakatra 870 tapitrisa euro kosa ny taona 2016. Izany hoe nisy fiakarany 31%. Ilana fanatsarana hatrany anefa, raha ny nambara, na dia eo aza izay tombony izay ny resaka kalitao sy fenitra ara-pahasalaman’ny entana aondrana, hoy kosa ny masoivoho eoropeanina, Antonio Benedito Sanchez, fa antoky ny fitohizan’ny fisokafan’ny lalam-barotra eo amin’ny 2 tonta izany. Nanampian’ny minisitra izany ny filazana fa rehefa misokatra amintsika ny tsena eoropeanina dia misokatra ho azy izao tontolo izao. 45% amin’ireo entana amidy eny an-tsena amin’izao fotoana izao no fanondrantsika raha toa ka 20% kosa no avy any ivelany, raha ny nambaran’ny minisitra hatrany. Niara-nivory tetsy amin’ny Carlton koa moa ireo firenena mpikambana eo anivon’ny AFOA na ilay fifanarahana ara-barotra eo amin’i Madagasikara, Maorisy, Seisela sy Zimbaboe ary Kaomoro.